၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင်နှစ်၊ အားကစားနှင့် ကာယပညာသိပ္ပံ(ရန်ကုန်၊ မန္တလေး၊ မော်လမြိုင်၊ (တောင်ကြီး)ကျောင်းများ ပြိုင်ပွဲ (ကြက်တောင်)
အားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန၊ အားကစားနှင့်ကာယပညာသိပ္ပံ (ရန်ကုန်၊ မန္တလေး၊ မော်လမြိုင်၊ တောင်ကြီး) အားကစားပြိုင်ပွဲကို နေပြည်တော်နှင့် ရန်ကုန်တွင် (၂၇. ၁၂.၂၀၁၇) ရက်နေ့မှ (၂.၈.၂၀၁၈) ရက်နေ့အထိ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင်နှစ်၊ အားကစားနှင့် ကာယပညာသိပ္ပံ(ရန်ကုန်၊ မန္တလေး၊ မော်လမြိုင်၊ (တောင်ကြီး)ကျောင်းများ ပြိုင်ပွဲ (မြားပစ်)
မြားပစ်အားကစားနည်း အားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန၊ အားကစားနှင့်ကာယပညာသိပ္ပံ (ရန်ကုန်၊ မန္တလေး၊ မော်လမြိုင်၊ တောင်ကြီး) အားကစားပြိုင်ပွဲကို နေပြည်တော်နှင့် ရန်ကုန်တွင် (၂၇.
၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင်နှစ်၊ အားကစားနှင့် ကာယပညာသိပ္ပံ(ရန်ကုန်၊ မန္တလေး၊ မော်လမြိုင်၊ (တောင်ကြီး)ကျောင်းများ ပြိုင်ပွဲ (ပြေးခုန်ပစ်)
အားကစားနှင့် ပညာရေး ပေါင်းစပ်သင်တန်း သင်တန်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား (၁.၆.၂၀၁၇)
အားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန၊ အားကစားနှင့်ကာယပညာသိပ္ပံ (ရန်ကုန်) ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင်နှစ်၊ အားကစားနှင့်ပညာရေးပေါင်းစပ်သင်တန်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကို (၁.၆.၂၀၁၇) ရက်နေ့ ကြာသပတေးနေ့ နံနက် (၀၉းဝ၀)နာရီအချိန်တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၊ လူမှုရေးဝန်ကြီး ဦးနိုင်ငံလင်းက သင်တန်းအဖွင့်အမှာစကားပြောကြားခဲ့ပါသည်။
“ထူးချွန်အားကစားသမားများအား ဆုချီးမြှင့်ခြင်းနှင့် အထူး နေ့လည်စာစားပွဲ အခမ်းအနား” (၁၇.၁၀.၂၀၁၆)
ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန၊ အားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန၊ အားကစားနှင့်ကာယပညာသိပ္ပံ (ရန်ကုန်) ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ပညာသင်နှစ် အားကစားနှင့်ပညာရေးပေါင်းစပ်သင်တန်း “ထူးချွန်အားကစားသမားများအား ဆုချီးမြှင့်ခြင်းနှင့် အထူးနေ့လည်စာစားပွဲ အခမ်းအနား” ကို (၁၇.၁၀.၂၀၁၆) ရက်နေ့ နံနက် (၁၁း၃၀)အချိန်တွင် အား/ကာသိပ္ပံ (ရန်ကုန်) ကျိုက္ကဆံကွင်း၊ ပြည်ထောင်စုခန်းမ၌ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
အားကစားနှင့်ကာပညာသိပ္ပံ (ရန်ကုန်) နှစ်ပတ်လည်နေ့ အခမ်းအနား (၁.၈.၂၀၁၆)
“စုပေါင်းဝါဆိုသင်္ကန်း ဆက်ကပ် လှူဒါန်းပွဲ” (၁၈.၇.၂၀၁၆)
ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန၊ အားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန၊ အားကစားနှင့်ကာယပညာသိပ္ပံ (ရန်ကုန်)တွင် နှစ်စဉ်ကျင်းပမြဲဖြစ်သော သံဃာတော်အရှင်သူမြတ်တို့အား “စုပေါင်းဝါဆိုသင်္ကန်းဆက်ကပ်လှူဒါန်းပွဲ” ကို (၁၈.၇.၂၀၁၆) ရက်နေ့တွင် အားကစားနှင့်ကာယပညာသိပ္ပံ (ရန်ကုန်) ပြည်ထောင်စုခန်းမတွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
အားကစားနှင့် ပညာရေး ပေါင်းစပ်သင်တန်း သင်တန်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား (၇.၆.၂၀၁၆)
ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန၊ အားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန၊ အားကစားနှင့်ကာယပညာသိပ္ပံ (ရန်ကုန်) “၂၀၁၆-၂၀၁၇ ပညာသင်နှစ်၊ အားကစားနှင့်ပညာရေးပေါင်းစပ်သင်တန်း သင်တန်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကို (၇.၆.၂၀၁၆) ရက်နေ့ နံနက် (၀၉းဝ၀) နာရီအချိန်တွင် အားကစားနှင့်ကာယပညာသိပ္ပံ (ရန်ကုန်)၊ ကျိုက္ကဆံကွင်း ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
နည်းပြဆရာများ မွမ်းမံသင်တန်း အမှတ်စဉ် (၁/၂၀၁၆)
အားကစားနှင့်ကာယပညာသိပ္ပံ (ရန်ကုန်)တွင် (၂.၅.၂၀၁၆) ရက်နေ့မှ (၂၃.၅.၂၀၁၆) ရက််နေ့အထိ နည်းပြဆရာများမွမ်းမံသင်တန်းကို ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ အားကစားနှင့်ကာယပညာသိပ္ပံ (ရန်ကုန်)တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်လျှက်ရှိသော နည်းပြများ၏ အရည်အသွေးတိုးတက်မြင့်မားလာစေရန်နှင့် ခေတ်နှင့်အညီပြောင်းလဲတိုးတက်လျက်ရှိသော အားကစားနည်းစနစ်၊ လေ့ကျင့်ရေးပိုင်းဆိုင်ရာများနှင့် ပြိုင်ပွဲနည်းဥပဒေများ သိရှိနားလည်စေရန်နှင့် ခေါင်းဆောင်မှု၏ နည်းဥပဒေသနှင့် လက်တွေ့ကျသော လုပ်နည်းလုပ
နွေရာသီအေ ခြခံ အားကစား သင်တန်းဆင်းပွဲအခမ်းအနား (၂၄.၅.၂၀၁၆)
အားကစားနှင့်ကာယပညာသိပ္ပံ (ရန်ကုန်)တွင် ရက် (၁၀၀) စီမံချက်အရ (၂၅.၄.၂၀၁၆ ရက်နေ့မှ ၂၃.၅.၂၀၁၆ ထိ) အခမဲ့ဖွင့်လှစ်သင်ကြားပေးခဲ့သော ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ နွေရာသီအခြေခံအားကစားသင်တန်းဆင်းပွဲအခမ်းအနားကို (၂၄.၅.၂၀၁၆) ရက်နေ့ အင်္ဂါနေ့တွင်ပြုလုပ်ကျင်းပခဲ့ပါသည်။